Nhau - The Non-excavation Technology yeHDPE Pipeline
Iyo Isiri yekuchera Tekinoroji yeHDPE Pipeline
In zvivakwa zvemunisiparati zvepasi pevhu, iyo yakareba yakavigwa pombi system haisvikike uye isingaoneki.Pese panoitika matambudziko akadai sedeformation uye kuvuza, hazvidzivirike kuti inoda "kuvhurwa" kuti ichenurwe uye kugadziriswa, izvo zvinounza kusagadzikana kukuru kuhupenyu hwevagari.Nekuda kweizvozvo, pombi isina trenchless tekinoroji yakavapo.
Iyo isiri yekuchera tekinoroji yepombi inonzi "minimally invasive technique" yeguta.Iyo yakachengeteka uye inoshanda yekuvaka nzira yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.Inogona kukurumidza uye nekugadzirisa zvikamu zvakawanda zvepombi panguva imwe chete pasina kuchera kwakawanda., Kugadziridza, kurashira.
Trenchless pombi tekinoroji yakagadzira isina trenchless HDPE yakasimba madziro emvura pombi, inokodzera nzvimbo uko kuchera kusingagone kuitwa uye inosangana nezvinodiwa zvemazuva ano ehupenyu pombi network upgrades.
Inoshandisa yakakwira-density polyethylene seyakagadzirwa uye inogadzirwa neextrusion uye vacuum saizi.Madziro emukati nekunze akatsetseka uye akati sandara.Haisi kungoenderana nemhoteredzo chete, asiwo yakanakisa mukushushikana kwekupwanya kuramba, makemikari kuramba, kuderera-tembiricha kukanganisa kusagadzikana, etc. Iine hunhu hwekuchembera kuramba uye ine hupenyu hunosvika makore makumi mashanu, iyo inoderedza zvakanyanya kuwanda kwepombi. kugadzirisa uye kutsiva, uye zvinobudirira kudzora engineering Kushanda uye kugadzirisa mari.
Imwe yemabhenefiti eiyo trenchless HDPE yakasimba madziro emvura pombi ndiyo yakafara siyana yezvirevo.Rudzi rwunobva kudn160-dn800, uye kuomarara kwemhete ndeye SN8, SN16, uye SN32, iyo inogona kusangana neakasiyana mainjiniya zvinodiwa kusvika pamwero mukuru.Panguva imwecheteyo, kubatana kwayo kwakachengeteka uye kwakavimbika kunoita kuti nzira yekuvaka ive nyore uye nyore.
Pamusana pekusaparadza nzvimbo yemaguta, kusakanganisa kutakura, kusapindira nehupenyu hwekugara kwevagari, uye kusavhiringidza mapaipi epasi pevhu, nezvimwewo, kurongeka kwebasa renzanga kunovimbiswa.Kuvandudza mashandiro ekuvaka zvivakwa zvemadhorobha uye kuita kuti guta riwedzere kuvhurika.